Google Search Console meriri Crap nke m! | Martech Zone
Sunday, October 26, 2014 Tọzdee, Machị 25, 2021 Douglas Karr
Anyị na-arụ ọrụ ehihie na abalị ịkwadebe Martech maka mgbanwe mgbanwe na-abịanụ. Ọrụ gụnyere ịgụnye azụ site na ntinye ederede 4,000 - ijide n'aka na anyị gosipụtara onyonyo, ọdịnaya ahụ abụghị nke oge (dịka nyiwe nke pụọ azụmaahịa), yana ị hụ na anyị enweghị nsogbu ndị ọzọ dị iche… dịka ihe gbasara 100 posts. na m mebiri koodu html maka snippets koodu, na ọtụtụ ndị ọzọ. Anyị mekwara nyocha azụlink na disavower ọtụtụ saịtị ntanetị nke na-atụ anyị aka.
Otu mmelite ọzọ bụ na anyị wụnye ihe Akwụkwọ SSL na nkwadebe maka ụfọdụ ụzọ ndu na nhọrọ ecommerce anyị ga-agbakwunye na saịtị ahụ. Ghara ikwu na Google hinted na ịnwe saịtị echedoro nwere ike inwe mmetụta dị mma na ọkwa n'ọdịniihu. Mgbanwe niile m na-eme enweela mmetụta. N'ezie, n'ọnwa gara aga, okporo ụzọ igwe nchọta anyị amụbaala okpukpu abụọ. Nke a bụ nseta ihuenyo site na Semrush:
Anyị n’eziokwu anaghị enwe oge iji rụọ ọrụ na Martech dị ka nke a ebe ọ bụ na anyị na-arụ ọrụ iji hụ na saịtị ndị ahịa anyị kachasị nke ọma. Dịka akụkụ nke usoro anyị, a na m eji ọtụtụ ngwaọrụ iji kpochapụ saịtị ahụ na-achọ nsogbu, ma mezie ụfọdụ nsogbu dị egwu Njikwa Nchọta Google kpughere… dị ka oyiri utu aha, wdg
Ya mere… chee mmeghachi omume m mgbe m banyere Njikwa Nchọta Google Izu a wee hụ nke a:
Achọpụtara m maka njehie na Webmasters na njehie adighi ala. Enyochare m ma nyochaa m Ndepụta CMS SEO - robots.txt file, my sitemaps, my redirects… ihe niile! Achọpụtara m ozi ọ bụla (dịka ntaramahụhụ) na ọ nweghị ozi e zigara m. N’agbanyeghi na m gbahapụrụ, enweghị m ike ịjụ ma ọ dị ihe na-emejọ Webmasters.
Ma ọ bịakwutere m… gịnị ma ọ bụrụ Google Search njikwa chọrọ ụzọ echedoro gaa na saịtị? M debara aha m https: //martech.zone kama http://martech.zone. Emeghị m ka m gbanwee mkpado nkụnye eji isi mee. Nke a bụ ihe gbasiri ike:
Google… ị na-atụ ụjọ ihe m na-amaghị. Echere m na m mere ihe jọgburu onwe m na saịtị m nke na m na-egbochi ọchụchọ kpamkpam. Chei!
Tags: ndị webmasters googlengwa webmasters googlehttp ọ bụhttps sịNdị websaịtị httpsseo na-abụghị sslseo sslssl vesos non-ssl seossl webmasterwebmaster ngwaọrụwebmastersndị webmasters httpsonye nlekọta web ssl